Rohingya Students Forum: ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ မင်္ဂလာ ရတုပိုဒ်စုံ
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ မင်္ဂလာ ရတုပိုဒ်စုံ
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် လက်ရာ ရတုပိုဒ်စုံ …
၁။ ငယ်ပေါင်း မိတ်ဆွေ၊ မန်း ရပ်မြေက၊ စေ့ရေတွေးဆ၊ ချီအချဖြင့်၊ ညီမျှစေမှု၊ စုံရတုဟု၊ ယခု ရေးစီ၊ စာပလီကို၊ နာရီဖင့်လျား၊ ခွင့်မအားလည်း၊ ရပ်ခြားဝေးကြူ၊ စာပေးသူအား၊ ရေးယူကြောင်း ဟိတ်၊ ချစ်ကြည်စိတ်ဖြင့်၊ တစ်ဆိတ်လောက်ပင်၊ ရှုစေချင်၏၊ ဟိုစဉ်ငယ်သော်၊ သက်ဆယ်ကျော်က၊ နှစ်ဖော်တူကွ၊ မေတ္တာမျှ၍၊ ဒေသကွာဝေး၊ ရှိလေသေးလည်း၊ အေးလျှင်အတူ၊ ပူလျှင်မကွဲ၊ ရှိစမြဲဟု၊ ဝမ်းထဲပိုက်ခါ၊ ဆင်မိပါ၏။ ယခုတစ်ကြောင်း၊ တစ်ဇာတ်ပြောင်း၍၊ ငယ်ပေါင်းမျိုးမြတ်၊ ခင်မောင်လတ်၏ စုတ်သပ်ချင်ဖွယ်၊ ချစ်ကြိုးနွယ်သည် ပျက်ပြယ်ထင်ရပြန်တော့သည်။
၂။ သွယ်ပြောင်းလှစ်ခြွေ၊ မှာလိုက်ပေ၏၊ ရက်ရေမကွာ၊ ထိုစဉ်ခါက၊ စာလာစာပြန်၊ စာတမန်သည်၊ ဖန်ဖန်သွယ်ဆက်၊ ရှိပါလျက်နှင့်၊ ဖြစ်ပျက်ရပုံ၊ ကြောင်းဥဿုံကို၊ စေ့ငုံသေချာ၊ မသိပါငဲ့၊ ထင်ရာထင်မှား၊ ကြံစဉ်းစားသော်၊ ရပ်ခြားနယ်ဝေး၊ မြို့မကွေးက၊ စာပေး လေတိုင်း၊ ရေလှိုင်းမြစ်ကြော၊ စာ သင်္ဘောသည်၊ ဝဲသြဃစုတ်၊ နစ် ခါမြုပ်၍၊ ငုပ်လေသလော၊ ကြံ စိတ်စောလျက်၊ တွေးတောစဉ်တွင်၊ ယခင်မိတ်ဦး၊ သူတစ်ထူး၏၊ အိမ်မှူးထံမှောက်၊ ပို့ရောက်စေလာ၊ လတ်၏စာကို၊ သေချာသိမှ၊ သတိရ၍၊ ဖြစ်ရလေတယ်၊ ညှိုးစိတ်ငယ်သည်၊ ရှက်ဖွယ်မြင်ရ ပြန်တော့သည်။
၃။ ဘယ်ကြောင်းဖြစ်ထွေ၊ မြင်မိချေ၏၊ ရွှေငွေစုပေါင်း၊ ရေနံချောင်းဟု၊ မြစ်စောင်းမို့မို့၊ မှိုင်းရည်ညို့တဲ့၊ မြို့နဂရာတွင်၊ သပြာ စန်းငွေ၊ သန်းကုဋေဖြိုး၊ မှန်းခြေတိုး၍၊ အကျိုးခွင့်ပေး၊ တွင်းသူဌေး၏၊ ရင်သွေးပိုက်ဖြား၊ ပျိုနုထွားနှင့်၊ စုလျားပတ်ရစ်၊ လွတ် ပေါင်းကျစ်၍၊ အချစ်ဓာတ်ငွေ့၊ သူ့ရင်ငွေ့ကြောင့်၊ မေ့လေသလား၊ စဉ်းစားတတ်ပေါင်၊ တို့မောင်မောင်သည်၊ ယခေါင်ပြကတေ့၊ စိတ်မှရွေ့လျက်၊ လိပ်မေ့ဖွတ်မေ့၊ ပတတ်မေ့နှင့်၊ မေ့အမျိုးမျိုး၊ မေ့ပင်ပျိုးလည်း၊ မညှိုးမေတ္တာ၊ ရှိလျက်ပါဟု၊ ထက်ညာမန်းပျော်၊ အဆွေတော်က၊ ထုတ်ဖော်ရှုဖွယ်၊ စီကုံးခြယ်သည်၊ ဆက်သွယ်ခင်ရ ပြန်တော့သည်။
အာဇာနည် ဦးရာဇာတ် ရေးဖွဲ့ခဲ့သည့် ကဗျာ သုတေသန မှတ်တမ်း
အငြိမ်စား မြန်မာစာပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ဇော်က သူရေးသည့် တိုင်းရင်းမွတ်စလင်မ် စာပြုစာဆို ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ(ဒုတိယတွဲ) စာအုပ်ကို စာရေးသူထံ လက်ဆောင် ပို့လိုက်ပါသည်။ ဆရာ့စာအုပ်ထဲတွင် အာဇာနည်တစ်ဦးဖြစ်သော ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏အကြောင်းလည်း ပါသည်။ ဦးရာဇတ်ရေးသည့် ရတုပိုဒ်စုံကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုရတုပိုဒ်စုံကို ဖတ်ရသော အခါ စာရေးသူထံတွင်ရှိသော ဒဂုံပ ဦးဘတင်၏ မှတ်စုမှ ဦးရာဇတ်၏ ရတုပိုဒ်စုံကို သွား၍သတိရသည်။
ဦးလေးတင် (ဒဂုံပ ဦးဘတင်)၏ မှတ်စုတွင် ဆရာကြီးဦးရာဇတ်၏ ရတုပိုဒ်စုံကို ဆရာကြီး၏ ငယ်ပေါင်းမိတ်ဆွေ တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးခင်မောင်လတ် (နောင် ပြန်ကြားရေး အတွင်းဝန် ဖြစ်ခဲ့သူ) ထံသို့ ရေးပို့ခဲ့သဖြင့် ဦးခင်မောင်လတ်ထံမှ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
`ဆရာကြီးသည် စကားပြေသာမက ရတုကဗျာ အရေးအသားလည်း ဝါသနာပါသည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရေနံချောင်းတွင်းစားသူဌေးသား၊ ကုန်စည် ဖြန့်ဖြူးရေးမင်းကြီး ဦးခင်မောင်လတ်အတွက် မင်္ဂလာရတုပိုဒ်စုံ ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ ဦးခင်မောင်လတ်က မိမိမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ဆရာကြီးကို ဖိတ်ကြားသည်။ ဆရာကြီးက မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ မသွားနိုင်သည့်အတွက် မင်္ဂလာရတု ပိုဒ်စုံကို ဖွဲ့သီပို့လိုက်သည်။ ဤရတုပိုဒ်စုံကို ဦးခင်မောင်လတ်၏ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင် ဖတ်ကြားပြသည့် အခါ ကြွရောက် လာကြသော မင်းပရိသတ်များက အထူးသဘောကျ ချီးကျူးသြဘာပေးကြသည်။ ကာယကံရှင်များကလည်း၊ ရတုပိုဒ်စုံကို ဆရာကြီး၏ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြစ် တမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းခဲ့ကြသည်´ဟု ရေးသား ဖော်ပြထားပါသည်။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာ ဒေါက်တာအော်ဇော်ထံ ဖုန်းနှင့်ဆက်၍ ဤရတုပိုဒ်စုံကို ဆရာမည်သို့ရကြောင်း မေးရသည်။ ဆရာက မင်္ဂလာဆောင်များတွင် မင်္ဂလာ ရတုပိုဒ်စုံများလိုက်၍ ရွတ်ဖတ်လေ့ ရှိသောသူတစ်ယောက်အား ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်က `မင်းတို့ ဆရာကြီးလည်း မင်္ဂလာ ရတုပိုဒ်စုံ ရေးစပ်ခဲ့ဖူးတယ်´ဟု ပြောပြီးပေးခဲ့သဖြင့်၊ ထိုသူထံမှ ဆရာဒေါက်တာအောင်ဇော် ရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါသည်။
ဆရာဒေါက်တာအောင်ဇော်၏ စာတွင် ဆရာကြီး သင်္ခါက ၁၉၆၉ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ထုတ် လုပ်သားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် ဤရတုပိုဒ်စုံ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးရေးကြောင်း၊ `ကာရန် အစပ်အဟပ်နှင့် လေယူလေသိမ်း အဖွဲ့အနွဲ့ တို့ကား၊ သာမညပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ လက်ရာမဟုတ်ဘဲ၊ အတော်အတန် ကဗျာဉာဏ် ရသဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံအောင် နိုင်နိုင်နင်းနင်း ဖွဲ့နိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ သုတေသီများ ခန့်မှန်းနိုင်လောက်ပေသည်´ဟု ဖော်ကျူးထားကြောင်း စသဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
၁၉၆၉ ခု ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ထုတ် လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာကို ရှာမရ၍ ဆရာကြီး သင်္ခါ၏ ဆောင်းပါးကို စာရေးသူ မဖတ်ရပါ။ သို့သော် ဆရာကြီး၏မြေးကလေး ဒေါက်တာမွန်မွန်အောင်သည် ထားဝယ် တက္ကသိုလ်မြန်မာစာ ဌာနသို့ ပြောင်းလာပါသည်။ `ဘမျိုးဘိုးတူ´ဆိုသကဲ့သို့ ဆရာမ မွန်မွန်အောင်ကလည်း `ပန်းနှင်း မွန်မွန်´ကလောင်အမည်ဖြင့် စာများရေးသည်။ (ယခု ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းသွားပြီ) ဆရာမ ပေး၍ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းမှ ဆရာကြီး သင်္ခါ၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရပါသည်။ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ရေးသည့် ရတုပိုဒ်စုံ ၃ ပုဒ်အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆရာ ကြီးသင်္ခါ၏ ဆောင်းပါးတွင် `ဤရတုပိုဒ်စုံ ၃ ပုဒ်ကား၊ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ လက်ရာအစစ်များသာတည်း။ ထိုရတုပိုဒ်စုံကို ဆရာကြီးသည် မကွယ်လွန်မီ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်လောက်က ဆရာကြီး၏ ငယ်ပေါင်းမိတ်ဆွေ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်လတ် (ပြန်ကြားရေး အတွင်းဝန် ဦးခင် မောင်လတ်၊ ယခု ကွယ်လွန်ပြီ)ထံသို့ ရေးပို့ခဲ့သော ရတုပိုဒ်စုံများ ဖြစ်သည်ဆို၏။
ယခုဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ရာ၊ စာဟောင်း တစ်ပုဒ်ပင်ဟူ၍ ဆိုရပေမည်။ ဆရာကြီး၏ ကဗျာအရ ဦးခင်မောင်လတ်မှာ ရေနံချောင်း ဇာတိဖြစ်ဟန်တူကာ၊ ရေနံမြေသူတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျရာမှ ထိုစဉ်အခါက မကွေးမြို့တွင် နေထိုင် ဟန်တူ၏။ ထိုရတုပိုဒ်စုံ ၃ ပုဒ်ကို ဤစာရေးသူသည် ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ဦးစန်းမောင်(သန်လျင် ငဇင်ကာနှင့် ပေါ်တူဂီရာဇ၀င်ကျမ်းပြု၊ စာရေးဆရာသီဟ၊ ယခုကွယ်လွန်)ထံမှ ကူးယူရရှိခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးစန်းမောင်မှာ ထိုစဉ်က ဒီးဒုတ်ဆရာချို မကွယ်လွန်မီ နိုင်ငံရေးများကြောင့် အလွန် အလုပ်များနေသော ဆရာ့အား တပည့်ရင်း တစ်ဦးအနေဖြင့် ကူညီကာ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်တွင် အယ်ဒီတာအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေစဉ်ဖြစ်၏။ စာရေးသူတို့ကလည်း သူ့ထံသို့ ရောင်းရင်း ရေးဖော်ရေးဖက် မိတ်ဆွေများဖြစ်၍ မကြာမကြာ ရောက်ခဲ့၏။
သို့နှင့် ၁၉ ဇူလိုင်တွင် လူသတ်သမားများ လက်ချက်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်နှင့်တကွ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံး ကွယ်လွန်သည့် အခါတွင်လည်း ဆရာချို့အကြောင်းများနှင့် သူ့ထံသို့ ရောက်သွားရာမှ ကျဆုံးလေသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အကြောင်းများနှင့် စကားစပ်မိရာ၊ ယခုဦးရာဇတ် (ထိုစဉ်က ၀န်ကြီး) အကြောင်းသို့ ရောက်သွားခြင်းဖြစ်၏။
ဦးစန်းမောင်(သီဟ)က ဆရာကြီး ဆေးပေါ့လိပ် အလွန် ကြိုက်တတ်ပုံကလေးများနှင့်တကွ ယခုကဲ့သို့ မကွယ်လွန်မီ အချိန် ကလေးတွင် ဘုရင်ခံ၏အမှုဆောင် အစိုးရ၀န်ကြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သူသွားရောက် တွေ့ဆုံ သတင်းထောက်ခဲ့စဉ် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ရေးခဲ့သည်ဆိုသည့် ရတုကဗျာ သုံးပုဒ်ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း စကားစပ်မိ ပြောဆိုပါ၏။
ဤတွင် စာရေးသူမှာ စာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဦးစန်းမောင်ထံမှ ထို ကဗျာကို မရအရ တောင်းပန်တိုးလျှိုး ကြည့်ရှုခွင့်တောင်းပြီးနောက်၊ ကူးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ဖြစ်ရကား ဆရာကြီး သင်္ခါက ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်က သူ၏ငယ်ပေါင်း မိတ်ဆွေ ဦးခင်မောင်လတ်ထံ ရေးပို့ခဲ့သော ရတုပိုဒ်စုံ သုံးပုဒ်ကို ဦးစန်းမောင် (စာရေးဆရာ သီဟ)ထံမှ ရရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဦးလေးတင် (ဒဂုံပ ဦးဘတင်) မှတ်စုတွင် ထိုရတုပိုဒ်စုံ သုံးပုဒ်ကို ဦးခင်မောင်လတ်ထံမှ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရေးထားသည်။ ဆရာဒေါက်တာအောင်ဇော်ကမူ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ကိုယ်တိုင်က သူ၏ခင်ပွန်း ရေးသားခဲ့သည့် ရတုပိုဒ်စုံ သုံးပုဒ်ကိုပေးခဲ့၍ ရရှိခဲ့သူထံမှတစ်ဆင့် ရခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤရတုပိုဒ်စုံ သုံးပုဒ်ကား ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ရေးခဲ့သည်ဆိုသည်မှာ အငြင်းပွားစရာ မရှိခဲ့ပေ။
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် လက်ရာ ရတုပိုဒ်စုံကို ဖော်ပြရလျှင်…
၃။ ဘယ်ကြောင်းဖြစ်ထွေ၊ မြင်မိချေ၏၊ ရွှေငွေစုပေါင်း၊ ရေနံချောင်းဟု၊ မြစ်စောင်းမို့မို့၊ မှိုင်းရည်ညို့တဲ့၊ မြို့နဂရာတွင်၊ သပြာ စန်းငွေ၊ သန်းကုဋေဖြိုး၊ မှန်းခြေတိုး၍၊ အကျိုးခွင့်ပေး၊ တွင်းသူဌေး၏၊ ရင်သွေးပိုက်ဖြား၊ ပျိုနုထွားနှင့်၊ စုလျားပတ်ရစ်၊ လွတ် ပေါင်းကျစ်၍၊ အချစ်ဓာတ်ငွေ့၊ သူ့ရင်ငွေ့ကြောင့်၊ မေ့လေသလား၊ စဉ်းစားတတ်ပေါင်၊ တို့မောင်မောင်သည်၊ ယခေါင်ပြကတေ့၊ စိတ်မှရွေ့လျက်၊ လိပ်မေ့ဖွတ်မေ့၊ ပတတ်မေ့နှင့်၊ မေ့အမျိုးမျိုး၊ မေ့ပင်ပျိုးလည်း၊ မညှိုးမေတ္တာ၊ ရှိလျက်ပါဟု၊ ထက်ညာမန်းပျော်၊ အဆွေတော်က၊ ထုတ်ဖော်ရှုဖွယ်၊ စီကုံးခြယ်သည်၊ ဆက်သွယ်ခင်ရ ပြန်တော့သည်။… ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီးဦးရာဇတ်၏ ရတုပိုဒ်စုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာ ဒေါက်တာအောင်ဇော်က သူ၏စာအုပ်တွင်…
`အချီညီ အချညီ ရတုဖြစ်ပါသည်။ ချီးကျူးဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး၏ ရတုတတိယပိုဒ်လာ လိပ်မေ့ဖွတ်မေ့၊ ပတတ်မေ့နှင့်၊ မေ့ အမျိုးမျိုး၊ မေ့ပင်ပျိုးလည်း၊ မညှိုး မေတ္တာ၊ ရှိလျက်ပါ´ ဟူသော ဆရာကြီး၏ ကဗျာဉာဏ် ကွန့်မြူးချက်သည် မနောခွေ့၊ သဘောတွေ့ဖွယ် ကောင်းပါသည်။
`နာရီဖင့်လျား၊ ချစ်ကြိုးနွယ်၊ သွယ်ပြောင်းလှစ်ခြွေ၊ ကြံသစိတ်စော၊ အိမ်မှူးထံမှောက်၊ မှိုင်းရည်ညို့တဲ့၊ သပြေစန်းငွေ၊ သန်းကုဋေ ဖြိုး´စသည့် ကျစ်လျစ်သော အသုံးကောင်းများသည် စာဆို၏ ဂန္ထဝင် ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိမှု ပေါ်လွင်ပါသည်´ဟု ရေးသားထားပေရာ မြန်မာစာပါမောက္ခ တစ်ယောက်၏ ဝေဖန်ချီးကျူး ရေးသားထားချက် ရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် စာရေးသူတို့အနေနှင့် မည်သို့မျှ အချိုပေါ် သကာလောင်း၍ မရနိုင်တော့ချေ။
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ကျဆုံးစဉ်က စာရေးသူမှာ ၆ နှစ်သား အရွယ်သာရှိသေးရာ၊ ဆရာကြီးအား မမြင်ဖူးလိုက်ပါ။ ဆရာကြီး၏ နာမည်နှင့် ရုပ်လက္ခဏာ၊ အဝတ်အစား၊ အဆင်အပြင်တို့ကိုသာ ဓာတ်ပုံများတွင် သာမန်တွေ့ မြင်ရသူတစ်ဦးအနေဖြင့်ကား၊ ထိုကဗျာသည် ဆရာကြီး၏ လက်ရာဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် အမှန်သံသယစိတ်ဓာတ်ဖြင့် အံ့သြသွားရပါသည်။
အခြားသူများလည်း စာရေးသူကဲ့သို့ပင် မှတ်ချဖြစ်မည်။ ဆရာကြီးသည် တိုက်ပိုင် အင်စပက်တော် မစ္စတာရှိတ် (ခ) အဗ္ဗဒူလ်ရဟ်မန်နှင့် ဒေါ်ပလုတ်(ခ) ဒေါ်ငြိမ်းလှတို့မှ မွေးဖွားလာသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာကြီး၌ ငယ်မည် `မောင်မောင်ကြီး´ဟူသော မြန်မာအမည်ရင်း ရှိခြင်း၊ ၁၀ တန်းက တည်းက ပါဠိဘာသာကို ယူခဲ့ခြင်း၊ အိုင်အေအထက်တန်းတက်ချိန် အင်္ဂလိပ်စာ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ရာ ပထမဆုရရှိခြင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် New Time မဂ္ဂဇင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ၃၆ ကောင်ထီအကြောင်း ဆောင်းပါးရေးသားပေးပို့ခဲ့ရာ ပထမတန်း ဆောင်းပါးဆု ရရှိခြင်း၊ ၁၉၂၁ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး ဗဟိုအမျိုးသားကျောင်း၌ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပါဠိဘာသာ သင်ကြားပို့ချသော ဆရာတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ မန္တလေး နန်းထိပ်ရှိ မဟာဝိသုတာရာမ ကျောင်းတိုက် အတွင်းရှိ ဓမ္မာရုံ၏ စာကြည့်တိုက်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ခြင်း၊ ဆရာကြီးသည် ရဟန်းရှင်လူများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံလေ့ရှိခြင်း၊ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကို အထူးလေးစားသော မန္တလေးကဲ့သို့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိ အမျိုးသားအထက်တန်း ကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်အဖြစ် ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပညာရေးနှင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းဌာန ဝန်ကြီး ဖြစ်လာသောအခါ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မန္တလေး ဥပစာကောလိပ်ကို အမြန်ဆုံး ဖွင့်လှစ်စေခဲ့ခြင်း၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဦးကိုလေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် တည်ထောင်ပြီးလျှင် ပါဠိတက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခု တည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း (ယနေ့ မြင်တွေ့ကြရ သော နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး၏ ရှေ့ပြေးဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်) ရဟန်း သံဃာ ဆရာတော်ကြီးများ၏ လေးစား ချစ်ခင်ခြင်းကို ခံယူခဲ့ရခြင်း၊ ရွှေနန်းတွင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိခေါ် လက်ထက်တော်တွင်း အဖြစ်အပျက် စာတမ်း အမည်ဖြင့် မန္တလေး သူရိယတိုက်မှ ၁၉၃၆ ခုတွင် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း၊ မန္တလေး သူရိယသတင်းစာ တတိယအကြိမ် နှစ်လည်အထူးထုတ် စာစောင်တွင် ကမ္ဘာ့သေမင်း၏ ဝါဏိဇ္ဇ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့ခြင်း စသည့် အချက်များကို ဆရာကြီး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ တွင် ဖတ်ရသောအခါ အထက်ပါရတု ပိုဒ်စုံကို ဆရာကြီး ရေးသားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ကို မအံ့သြတော့ပါ။ သို့ကြောင့် အာဇာနည် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ လက်ရာရတု ပိုဒ်စုံကို စာဖတ်ပရိသတ်များ အံ့သြကြရလေအောင် မျှဝေခံစား လိုက်ရပါတယ်။
[ပညာမွတ်သိပ်သူများ FB Group ]
Posted by Rohang king at 12:04 PM
Labels: literature, poem, well-known, ပညာရေး, သုတ
My Last Shelter [The Art Garden's Poem]
My First Day in School [The Art Garden's Poem]
Tell Me What My Fault Is [The Art Garden's Poem]
Do I Deserve No Rights? [The Art Garden's Poem]
Come Back Home [The Art Garden's Poem]
We Are Seeds [The Art Garden's Poem]
Broken Mirror [The Art Garden's Poem]
My Golden Homeland [The Art Garden's Poem]
Don’t Send Me to the Island [The Art Garden's Poem...
Behind My Life [The Art Garden's Poem]
Top-10 ကဗျာ ဆယ်ပုဒ် [The Art Garden Rohingya]
ရိုဟင်ဂျာ့ ဖြစ်အင် (The Art Garden ကဗျာ)